Internet Explorer Mbola Top Browser amin'ny fijerena mailaka | Martech Zone
Zoma, Martsa 8, 2013 Douglas Karr
Ireo olona ao amin'ny Litmus dia namoaka ity sary ity, Internet Explorer Mbola safidy tsara indrindra amin'ny mailaka miorina amin'ny Internet. Heveriko fa tsy nampoizina hatrany izany ho antsika eo amin'ny sehatry ny Internet - izay mihinana amin'ny Chrome sy Safari, saingy matetika no tsy hitantsika intsony hoe iza avy ireo mpanjifanay sy ny tontolon'ny orinasa misy azy ireo. Eo no ampiharana ny IE tsy misy safidy be loatra.
Ireo mpampiasa mailaka sy tranonkala manerantany dia manana fidirana amin'ny mpitety tranonkala bebe kokoa noho ny teo aloha. Ireo mpizaha efa misy fantany sy tiany hifaninana amin'ireo mpizaha vaovao vao azon'izy ireo zahana. Ka iza amin'ireo mpitety tranonkala no tian'ny mpampiasa? Miovaova ve ny fizahana mailaka sy ny fizahana ankapobeny? Andao jerena.
Tags: navigateurChromemailakampizaha mailakastatistikan'ny mpizaha mailakaFirefoxieInternet ExplorerSafari
Mar 8, 2013 ao amin'ny 4: PM PM
Hitako fa tsy dia mahasoa araka ny fieritreretanao azy ity angona ity. Manoro hevitra angamba izany fa manokatra mailaka any am-piasana ny olona, ​​ary IE no hany navigateur napetraka. Saingy tsy misy dikany lehibe azo ampiharina io angona io, satria ny mpamorona tranonkala dia mijery ny mpanjifan'ny mailaka fa tsy ny mpitety tranonkala. Ny HTML dia endrika henjana kokoa ary imbetsaka ny endrika miova eo amin'ny hotmail sy gmail fa tsy chrome amin'ny IE, farafaharatsiny amin'ny hevitry ny mailaka.
Hevitra tsara, Jason! Mampalahelo fa mino aho fa mbola manjaka ao ihany koa i Outlook. Midika izany fa ratsy kokoa aza ny fandikana - MS Word.
Apr 4, 2013 amin'ny 10: 44 AM
Izany dia nilaza fa maro ny olana amin'ny fandikana HTML izay atrehin'ny olona manerana ny fitaovana / lampihazo. Avy amin'ny zavatra niainantsika dia nanamafy ny top 10 eto izahay: http://www.informulate.com/blog/uncategorized/top-10-gotchas-to-watch-out-for-when-designing-html-email-or-enewsletters/